तपाई’ को यो साता निकै शुभ छ यी ७ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफलमा !!! – News Nepali Dainik
तपाई’ को यो साता निकै शुभ छ यी ७ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफलमा !!!
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ समय: २१:०२:३३
*#*मिति २०७७ साल माघ ११ गते पौष शुक्ल एकादशी आइतबारदेखि १७ गते द्वितीया तिथि शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल । यो साता मेष, कर्कट, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु र मकर गरी ७ राशिका लागि निकै शुभ देखिन्छ भने वृष, मिथुन, तुला, कुम्भ र मीन राशिका लागि यो साता अलि खराब देखिन्छ।
मिठो बोलीले काममा राम्रो प्रभाव पर्नेछ । धनको सुख मिल्ने एवम् सम्पत्तिको कारोबार बढ्नेछ। सन्तानबाट सहयोग एवम् विदेशबाट धन प्राप्तिको योग देखिन्छ । नयाँ सरसामानमा खर्च हुने तथा छोटो यात्राको सुख मिल्नेछ।
दिदीबहिनी तथा आफन्तबाट धनको सहयोग हुनाले घरायसी काम बन्नेछ । साताको अन्त्यमा भने परिवारमा विवाद आउने एवम् स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ । आफन्तसँगको कारोबारमा विवाद एवम् समस्या हुन सक्नेछ।
साथीभाइसँग घुमघाममा समय र पैसा बढी खर्च हुनेछ । मनोरञ्जनमा खर्च हुने तथा नयाँ ठाउँको भ्रमण हुनेछ । नयाँ नाता गाँसिने तथा वैवाहिक सुख मिल्नेछ । भोग विलास एवम् सावरी साधनमा खर्च बढ्नेछ ।
आफन्तको सहयोगले सानोतीनो व्यवहार टर्नेछ । नरम बोलीको प्रभावले ठूलाबडासँग सम्बन्ध बन्नेछ । साताको अन्त्यमा भने काममा जिम्मेवारी थपिने एवम् यात्रामा झन्झट आउँनेछ । सवारी साधनले धोका दिने एवम् खर्चमा वृद्धि हुनेछ ।
अनावश्यक ठाउँमा खर्च बढ्नेछ । साथीभाइसँग रमाइलो एवम् खानपिनमा पैसा बढी जानेछ । सरसामान हराउन सक्ने एवम् व्यवसायमा घाटा हुन सक्नेछ । साताको मध्यमा भने प्रेममा प्रगती, आफन्तसँग भेटघाट एवम् नयाँ मित्रता शुरु हुनेछ।
परिवारजनसँग रमाइलोमा खर्च बढ्ने एवम् भोजभतेर रमाइलो हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने व्यवसायमा आम्दानी बढ्ने एवम् लगानीका राम्रो प्रतिफल आउनेछ । धनसम्पत्तिको सहयोग मिल्नाले पुराना व्यवहारमा राहत मिल्नेछ ।
सोचेको एवम आँटेको कुरामा सफलता मिल्नेछ । विद्याध्ययन रुचि हुने तथा कला, साहित्य, संगीतमा पहिचान मिल्नेछ । आम्दानीको स्तर बढ्ने एवम धनसम्पत्तिको सहयोग मिल्नेछ ।
साताको मध्यमा भने बढी खर्च हुने एवम यात्रामा झन्झट आउनेछ । आफन्तसँग सामान्य मनमुटाव हुने तथा चिसोको समस्या हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक भेटघाट एवम विलासितामा धन खर्च हुनेछ । आफन्त भेटघाट तथा सन्ततीबाट खुशीयाली मिल्नेछ ।
ठूलाबडाको सहयोगले सरकारी काम अगाडि बढ्नेछ । राजनीतिक पहिचान मिल्नेछ । सरकारी क्षेत्र तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुबाट प्रशंसा मिल्नेछ । काममा जस मिल्नाले प्रतिष्ठा कायम हुनेछ । व्यापारमा राम्रो आम्दानी हुने तथा धनको कारोबार बढ्नेछ ।
पारिवारिक प्रेममा प्रगति हुने एवं वैदेशिक धनको सुख मिल्नेछ । शैक्षिक कार्यमा प्रगति र व्यस्तता बढ्नेछ । सन्तानको सहयोगले व्यवहारमा सहायता मिल्नेछ । भोज भतेर एवम् खानेकुरामा लगानी बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा भने यात्रामा झन्झट हुने तथा सामान्य बाधा आउन सक्नेछ ।
धर्म कर्ममा रुचि जाने एवम धार्मिक यात्रा हुनेछ । ठुलाबडासँग भेटघाट एवम सामाजिक काममा मन जानेछ । काममा प्रशंसा मिल्नाले पदोन्नतीको सम्भावना देखिन्छ । परोपकार तथा दान, धर्म, पुण्य कर्ममा समय व्यतित हुनेछ ।
Last Updated on: January 24th, 2021 at 9:02 pm
५५९ पटक हेरिएको